TEKNET Groupe : Mpanjinjara ireo vokatra Evolis - Madagascar Informations
TEKNET Groupe : Mpanjinjara ireo vokatra Evolis
20 avril 2017 28 juillet 2017 Madagascar Informations Aucun commentaire
Lohany eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny orinasa Evolis raha ny famokarana sy ny fanaparitahana ireo imprimante hanamboarana karatra nomerika na ny cartes plastiques personnalisés miampy ireo vokatra maro samihafa mifandraika amin’izany.
Antony maro ny tokony hampiasaina ny karatra nomerika ,isan’izany ny tsy fahafahana manao osoka ny fananana karatra mampiavaka ny orinasa ary indrindra indrindra ny fahafahana mamantatra ny mombamomba ny olona iray ao anatiny fotoana fohy.
Afaka mampiasa io karatra io avokoa ny sehatra rehetra toy ny eo anivony Banky ,ny oniversité ny karatra ahafahana mifidy sy ny sisa. Tsy tokony ho tara amin’izany fivoarany teknolojia izany isika eto Madagasikara satria efa tonga eto ireo vokatra Evolis ireo ka ny Groupe Teknet no mitsinjara izany.
Raha tsiahivina dia orinasa Frantsay niorina ny taona 2000 ny Evolis ka firenena miisa 140 maneran-tany no ahitana azy ary isan’izany isika eto Madagasikara.
← Pâque à Antsirabe
EVOLIS : leader dans le domaine de l’impression de cartes plastiques →
Nitsidika an’i Madagasikara ny Filohan’ny Madasun Frantsa